Owesilisa ubanjwe nenqwaba yamakhadi akwa-Sassa | Scrolla Izindaba
Owesilisa ubanjwe nenqwaba yamakhadi akwa-Sassa
Ngenkathi ebona ukuthi amaphoyisa ayembhekile, wehlisa isikhwama sakhe futhi wabaleka.
Kodwa owesilisa wase-Kagisanong, e-Mangaung e-Free State ubanjiwe waboshwa ngenkathi ehluleka ukuchaza ukuthi amakhadi akwa-Sassa angama-497 ebefunani esikhwameni.
Lokhu kube yintuthuko emaphoyiseni ase-Mangaung njengoba amakhadi axhumene nokubanjwa kwenkunzi e-Posini ngoNtulikazi odlule lapho okwantshontshwa khona amakhadi ayizi-14 000.
Okhulumela amaphoyisa uBrigadier Motantsi Makhele uthe ithimba le-Parkweg Tactical Response lithole imininingwane lase liqapha ngeso lokhozi indoda esolisayo ebilinde ekhoneni lomgwaqo uHills and Henry e-Bloemfontein.
“Ngenkathi ebona amaphoyisa, umsolwa wasilahla phansi isikhwama wazama ukubaleka, kodwa wabanjwa amalungu. Isikhwama sezemidlalo saseshwa kwatholakala amabhokisi amabili anamakhadi akwa-Sassa Postbank.”
Ngonyaka odlule, kwebiwa amabhokisi ayisikhombisa anamakhadi akwa-Sassa obekufanele ahanjiswe KwaZulu-Natali ngabasolwa abane ababaleke nge-Toyota Avanza.
Okhulumela abakwa-Sassa, uMotshewa Maleka, uthe bakujabulele ukuboshwa komsolwa.
Umsolwa uzovela eNkantolo yeMantshi yase-Bloemfontein kungekudala ngokutholakala nempahla okusolwa ukuthi yebiwe.